के वि'वाह पहिलेको यौ'न स'म्प'र्क थाहा हुन्छ? - Tufan Media News
के वि’वाह पहिलेको यौ’न स’म्प’र्क थाहा हुन्छ?
नेपालमा धेरैजसोले विवाहपछि मात्र यौ’न स’म्पर्क स्थापित गर्दछन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ। तथापि, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण तथा उच्च शिक्षासँगै विवाहपूर्व यौ’न सम्बन्ध राख्नेको संख्या बढेको छ। त्यसैले पहिलो यौ’न स’म्पर्क र सु’हागरात (म’धुरात्रि) को यौ’न स’म्पर्क अलिकति फ’रक छ।
प्र’सूति वि’शेषज्ञ कि’शोरावस्थामा पुगेसँगै विशेषतः विपरीत लिं’गीसँग यौ’न स’म्पर्क राख्ने चाहना हुन्छ। तर, वै’वाहिक स्थितिमा जसरी सामाजिक तथा का’नुनी तव’रमा यौ’न स’म्पर्क राख्न छुट छ, अन्य बेला यस्तो किसिमको स्व’तन्त्रता हुँदैन। विवाहपूर्व यौ’न स’म्पर्क राखेपछि तुलनात्मक रूपमा पुरुष यौ’नसाथीले धो’का दिने गरेको हुनाले विशेषतः प्रेमिल स’म्बन्धमा रहेका जोडीले लिं’ग यो’नि स’म्पर्कलाई विवाहपछिको लागि साँचेर राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
तर, पनि विशेष परिस्थितिवश वा दुवैको सहमतिमा यौ’न स’म्पर्क राख्न नसकिने भने होइन।मानिसमा कौतुहलता हुन्छ। ऊ नयाँ अनुभव सँगाल्न चाहन्छ। यस क्रममा पहिलो पटकको यौ’न स’म्पर्क आफ्नो प्रेमिका, चिने जानेका वा व्यावसायिक यौ’नक’र्मीसँग हुनसक्छ।उचित यौ’न शिक्षा एवं प्रजनन अं’गको वि’स्तृत जानकारीको अभावमा पहिलो पटकको यौ’न स’म्पर्क धेरैजसोका लागि त्यति सफल र सुखदायी हुँदैन। ड’र, त्रा’स, ह’तार, हता’स तथा असुरक्षित वातावरणमा यौ’न सम्पर्क राख्नु पर्दा यौ’न स’म्पर्क पूर्वको तयारीमा खासै ध्यान जाँदैन।
विवाहपूर्वको यौ’न स’म्पर्क :विवाहपूर्व यौ’न सम्पर्क राखिएको कुरा थाहा पाउन गाह्रो छ। पु’रुषलाई महिलाको यौ’नांगबारे सामान्य जानकारी हुने भए पनि आफ्नै यौ’नसाथीको यो’निको बनावट र स्वरूप यस्तै थियो भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले सामान्य तवरले यौ’न स’म्पर्क राखिसकेको अथवा नराखेको यो’नि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। हाइ’मेन (यो’निच्छद) को आधार लिन सकिन्छ तर यसको क्ष’ति अन्य कारणले पनि हुनसक्छ भन्ने हे’क्का राख्नुपर्छ।
कौमार्य भं’ग भए पनि लचिलो यो’निच्छद न’च्यातिएको हुनसक्छ भने यौ’न सम्पर्क वेगरको अन्य शा’रीरिक क्रि’याकलाप (साइकल चढ्दा, घोडा चढ्दा, खेलकुद) ले पनि पातलो यो’निच्छद च्या’तिएको हुनसक्छ। धेरैजसो विवाहपूर्वका यौ’न स’म्पर्क यो’जनाबद्ध नहुन सक्छन्। यसका कारण प्र’जनन ज’टिलता भने निम्तिन सक्दछ।
सफल यौ’न सुखका लागि स”म्भोगको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स’म्भोग व्यवस्थापनको क्रममा कतिपय कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै कि तनावरहित अवस्थामा मात्र यौ’न सम्पर्क गर्ने, अनावश्यक दबाबका बेला यौ’न स’म्पर्क नराख्ने, गो’प्यताको नि’श्चितता तथा एकान्त वातावरणमा मात्र यौ’न सम्बन्ध राख्ने, हतार वा थ’कानपछि क्रमशः शीघ्र वा ढिलो स्खलनको समस्या हुनसक्छ त्यसैले यथेष्ट आरामपछि पाकक्रीडामा पर्याप्त समय दिई यौ’न कार्य गर्ने, थप मादकता दिने हुनाले हल्का संगीत बजाउने त्यसै गरी दुवैका लागि स्वी’कार्य पफ्र्युम लगाउने, मधुरो प्रकाशको व्यवस्था गर्ने, डर’, चि’न्ता र थकान मेटाउने हुनाले दुवैले ह’ल्का म’द्यपान गर्ने, यौ’न कार्यको केही घण्टाअघि हल्का मिष्ठान्न भोजन गर्ने, यौ’न कार्यअघि र पछि शा’रीरिक सरसफाईमा ध्यान दिने।
अर्काको श्रीमानसँग रात बिताएपछि
काेराेना कहर : दुलही
गोरखाको एउटा गाउँ, जुन
सामाजिक संजालमा भाइरल साली(भिडियो)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज
लुडो खेल्दा जितेको भन्दै